May Nyane: အိမ်ဆီသွားတဲ့ လမ်း…
လှလိုက်တာ အမရေ..၊ Almost heaven တဲ့လား၊ ဂျွန်ဒင်းန်းဗားက လွမ်းမယ် ဆိုလည်း လွမ်းလောက်စရာပါပဲ၊ သစ်တောတွေ၊ တောင်တန်းတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြည့်ရတာ ဘယ်တော့မှ ရိုးသွားတယ်လို့ကို မရှိ ပါဘူးဗျာ..။
မော်လမြိုင် သံဖြူဇရပ်ကို ခဏပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ စထားတော့ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီဘက်က ဒီလောက်တောင် လမ်းကောင်းနေပြီလားဆိုပြီး အံ့သြသွားတယ်။ နောက်ဆက်ဖတ်ကြည့်မှပဲ သိတော့တယ်။ အဲလို ခရီးသွားရင်း ရှုခင်းလေးတွေ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရတာ ကျွန်မလည်း တော်တော် ၀ါသနာပါပြီး အဲလိုပြန်တင်ပြတာ သဘောကျတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးအသားလေး "လမ်းတွေက ကျမကို အိမ်ဆီ ရောက်အောင် ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်" တဲ့.
အနာဂတ်စိတ်ကူးနဲ့ တကယ်သွားနေတဲ့နေရာလေးကို ပေါင်းစပ်ထားတယ်နော်.
အိမ်ဆိုတာလေးကို အဓိပယ် ဖွင့်ထားလည်းကြိုက်သွားတယ်။
ဆက်ပြောရင် ကျမ ဘယ်လောက် တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လာတော့မယ်။ ကျမက ကိုယ့်ဇာတိမြေရဲ့ အဝေးကြီး တိုင်းတပါးနိုင်ငံမှာ ပျော်နေနိုင်.. စိတ်အေးချမ်း နိုင်တဲ့ တကိုယ်ကောင်း ဆန်သူပေါ့..။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်.. ကျမ တကယ်ပဲ ခု ကျမ နေရတဲ့ဘ၀မှာ ပျော်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
အပေါ်က me က မလေးပါ။ အစ်မ ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ်။
ဘလော့မှာ စာမရေးဖြစ်တာကြာလို့ အားပေးနေကျ ဘော်ဘော်တွေကို အားနာနေတာ.. ခု ပြန်တင်တော့လည်း တခုတ်တရ လာဖတ်ကြလို့မို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ :)
ထပ်တူ နားလည်တယ် အမ... ကိုယ့်လက်ရှိဘဝကို ကိုယ်တိုင် ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေရတာ ဘယ်လောက် ကောင်းသလဲ...း)
အပေါ်ဆုံးပုံက ကော့ကရိတ် မြဝတီလမ်းထင်နေတာ..
ငါ့နှယ် မှားတတ်လိုက်တာလို့.. ဂ ငယ်ကွေ့ကြီးပါ သတိရသွားတယ်...။
သဘာဝ ရဲ့ ရှုခင်းတွေက စိတ်ကို ငြိမ်းချမ်းစေတာ အမှန်ပါပဲ ခင်ဗျာ ... ခရီးထွက်ရတဲ့အခါ ... စိတ်က သဘာဝ ကို ထိတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း အားတွေ ပြည့်လာသလို ၊ လန်းဆန်းသွားသလို ခံစားမိပါတယ် ...။